Balıkesirlilere Müjde!.. Buharlı Lokomotif Geri Dönüyor - RayHaber
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး10 BalikesirဧဝံဂေလိတရားကိုမှBalıkesir! .. ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်း Returns
23 / 05 / 2019 Levent Elmastaş 10 Balikesir, ရထားလမ်း, လှိမ့်စတော့ရှယ်ယာ, အထွေထွေ, စက်ခေါင်း, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
mujde ရေနွေးငွေ့လုပ်တဲ့စက်ခေါင်းနောက်ကျော Balikesir ကနေထိန်းချုပ်လိုက်ပြီး
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု Yunusemre Manisa မြူနီစီပယ်အတွက်ရေနွေးငွေ့ခေါငျး Balikesir မှပြန်လာသောပါလိမ့်မည်ငှားရမ်းထားသော။
TCDD2557 နှင့်အတူ Yunusemre မြူနီစီပယ်အတွက် protocol ကိုအတူတထောင်ပေါင် Manisa, စက်ခေါင်းငွေ့ခေါ်ဆောင်သွားBalıkesirမှပြန်လာသောလဲလှယ်အတွက်ငှားရမ်းခြင်းနှင့် KDV ပေါင်းတစ်နှစ်အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာများအဆိုအရ Balikesir မြို့တော်ဝန် Yucel Yilmaz များ၏တုံ့ပြန်မှုပြီးနောက်အတွက်အရှိန်မြှ။ နည်းဥပဒေ၏ရလဒ်ပြန်လည်ရေနွေးငွေ့ခေါငျးကားလမ်းဖွစျလိမျ့မညျအဖြစ် Yilmaz သင်ယူခဲ့သည်။
Black ကရထားBalıkesir Returns 07 / 08 / 2019 Manisa မြူနီစီပယ်ယူနွတ် Emre ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအဆိုပါငှားရမ်းရေနွေးငွေ့ခေါငျး Balikesir ပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ခဏတစ်လွန်ခဲ့တဲ့ AK ပါတီ Balikesir လက်ထောက်မင်္ဂလာ Aydemir, တပြည်လုံးကိုရထား Manisa အားပေးပြီးမှမိမိအထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အတူBalıkesirကြောင့်ပြန်လည်အသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုကြေညာခဲ့သည်။ Aydemir ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်; "ဒီမြေယာရထားဘူတာအဝင်ဝအမျိုးသားအိမ်ခြံမြေအထွေထွေညွှန်ကြားမှုဖို့ Cengiz Topel လမ်းမှာပြပွဲခင်းကျင်းပြသနေစဉ်လွှဲပြောင်းရန်ရှိရာကျွန်ုပ်တို့၏Balıkesir'i Balikesir ဧရိယာ၏သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်လာနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလေ့ကျင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းမပါဘဲအပေါ်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ အလုပ်၏ TCDD ယေဘုယျညွှန်ကြားမှုနှစ်ဦးစလုံး၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှုနှစ်ဦးစလုံးကျနော်တို့ပူးတွဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ပြုပြင်ဖျော်ဖြေနှင့်အတူတင်သွင်းကြတဲ့ရလဒ်အဖြစ် ကိုယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်နယ်မှာmutakıpရဖို့မှီဝဲပါတယ်။ အခုတော့သူကဓါတ်ပုံတွေကိုတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် ...
Done Marsandiz တံတားသည် YHT တူရကီဘူတာ Returns 11 / 08 / 2012 တူရကီ-Eskisehir နှင့်တူရကီ-Konya မြန်နှုန်းမြင့်ရထား (YHT)2လချိုးတူရကီရထားဘူတာမှပြန်လာပြီးနောက်။ မှုကြောင့် Marsandiz Anadolu Boulevard 15 YHT ကဇွန်လကတည်းကကျန်းကနေအပေါ်ကိုပြောင်းရွှေ့အပေါ်တံတား၏ဆောက်လုပ်ရေးမှသြဂုတ်လ 17 ထံမှတူရကီရထားဘူတာကနေနောက်တဖန်ရွှေ့ဖို့ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ Marsandiz Anadolu Boulevard တံတားကလုံလုံလောက်လောက်လုံခြုံတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ပြန်လည်ဆောက်လုပ်, ဖြိုဖျက်မဟုတ်သောမြေပေါ်တွင်။ ထို့ကြောင့်တူရကီ-Eskisehir နှင့်တူရကီ-Konya YHT ရေကြောင်းခရီးရှည်သူကျန်း-Eskisehir-Konya-ကျန်းကျန်းနှင့်ကျန်းကတည်းကဇွန်လ 15 2012 ထံမှဝတ်ပြုကြ၏။ TCDD သည်တူရကီမီးရထားဘူတာများ၏ရှေ့မှောက်၌ကျန်း YHT 1 နာရီအကြာကနေထွက်ခွာသွား၏အချိန်ဤကာလအတွင်း ...
İZBAN Inc က စက်လုပ်သမားအလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာဖယ်ရှား 13 17 / 10 / 2012 İZBAN Inc ကို, အောက်တိုဘာလ 15 မှာစက်လုပ်သမားအလုပ်ကြောင့် Izmir သောင်းနဲ့ချီ၏ကျရှုံးခြင်း၏, နံနက်ယံ၌သားကောင်ကြုံတွေ့ခဲ့သည်။ İZBANအရာရှိများ, 13 စက်လုပ်သမားမောင်းနှင်မှုအလုပ်ထစ်ငေါ့၏ရပ်စဲပေါ်မှာစာချုပ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ စုပေါင်းညှိနှိုင်းအဓိပတိအနုညာတစီရင်အရေးယူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့İZBANအရာရှိများက၎င်းတို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်ဘုတ်အဖွဲ့မောင်းနှင်မှုမက်ဆေ့ခ်ျကိုသူတို့စွန့်ပစ်အလုပ်မလုပ်ကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်ထွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခြေအနေဖျော်ဖြေမရနိုင်ပါ။ İZBANအကျပ်အတည်းလုံးဝရပ်စဲထားပြီးကုမ္ပဏီအားဖြင့် operated Aliaga-Menderes လိုင်းအတွက်စတင်ခဲ့သည်။ ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌအကျပ်အတည်း ပတ်သက်. အကဲဖြတ်အစည်းအဝေးဖွငျ့ Izmir İZBAN TCDD ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Ismet Duman, ထံသို့ရောက်လာကြ၏။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြည်ထောင်စု၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီမိမိတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များလုပ်ပေးသူကိုကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူများမီးရထား ...
ပြန်မယ့်နျူကလီးယားရထား 26 / 04 / 2013 ထုတ်လုပ်မှုနောက်ကျောကိုရုရှားဒုံးကျည်ရှုပ်ထွေးသောသွားရထားလမ်းရထားများအတွက်နျူကလီးယားစစ်ပွဲမိမိလေ့လာမှုများစတင်ခဲ့ပါသည်။ 1987 2005 တစ်နှစ်ကတည်းကဤကဲ့သို့သောစနစ်များ analog နှစ်တွင်ဆိုဗီယက်နှင့်ရုရှားတပ်မတော်နေ့၏လက်နက်များအတွက်နေရာယူပြီးခံခဲ့ရသည်အထိပါပဲ။ ရုရှားကကာကွယ်ရေးဒုံးကျည်ရှုပ်ထွေးသောအတူ 1993 ရထားလမ်းအတွက်မဟာဗျူဟာလက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်အမေရိကန်အကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့်အညီအသုံးပြုသောခဲ့သညျ။ ဆန့်ကျင်ဒုံးကျည်စနစ်များ၏ 2002 သတ်မှတ်ထားတဲ့သူသည်စာချုပ်ကနေဆုတ်ခွာအပေါ်အမေရိကန်မဟာဗျူဟာလက်နက်လျှော့ချရေးစာချုပ်ရုရှားထံမှဆွဲထုတ်ခဲ့သည်။ ကျွမ်းကျင်သူများကအားသာချက်များနှင့်ရထားလမ်းဒုံးကျည်စနစ်ကရှုထောင့်များအသုံးပြုခြင်းအကဲဖြတ်ရန်။ Mobility ကို - ကာကွယ်မှုဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုထဲမှာဖွံ့ဖြိုးနည်းလမ်းနှင့်များ၏အခြေခံပေါ်မှာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောဒုံးကျည်၏ကျော်ကြားမိသားစုများ၏ထုတ်လုပ်မှု၏တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ ...
ပြန်ဒဏ္ဍာရီ Orient Express ကိုမှ Going 28 / 01 / 2014 အဆိုပါဒဏ္ဍာရီ Orient Express ကိုပြန်ဖြစ်ပါသည်: ပြင်သစ်, နှစ်တွင် 126 ပဲရစ်ကာလအတွင်း - အစ္စတန်ဘူလ်ဘဝအကြားလည်ပတ်ဒဏ္ဍာရီ Orient Express ကိုမီးရထားလိုင်း Returns ။ ပဲရစ်ကနေအစ္စတန်ဘူလ်မှတိုးချဲ့ဒဏ္ဍာရီ '' Orient Express ကို '(Orient Express ကို) ရထားလိုင်းကိုပြန်လာမယ့်။ အဆိုပါ 1883 ခုနှစ်တွင်သူ Orient Express ကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ပဲရစ်ဆက်သွယ်သဘောပေါက်သူတစ်ဦးဘယ်လ်ဂျီယံလုပ်ငန်းရှင်များက။ နှစ်တွေလိုင်းလမ်းကြောင်း (အာရေဗျ၏လောရင့်) အဲဒီအချိန်ကနေအချိန်နေရာချထားဖို့ဗြိတိန်သူလျှို TE Lawrence ကွဲပြားခြားနားသည်, ဂျာမန်ဖွားအမေရိကန်အဆိုတော်-မင်းသမီးကာလအထိအမြဲ Marlene Dietrich ၏အကျော်ကြားဆုံးအမည်များအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူခဲ့ပါတယ်။ မူလက Sirkeci ဘူတာနှင့်ဗြိတိသျှစာရေးဆရာ Agatha Christie ရဲ့ Orient အားဖြင့်ပုဒ်ဖြတ်ခရီး ...
အတူအကြား Edirne Plovdiv ရထားတောင်တက်စတင်
TEM ကားလမ်း Izmit ေူပာင်းလဲရေးကို Maintenance2လသည်ပိတ်ထားလိမ့်မည်
Done Marsandiz တံတားသည် YHT တူရကီဘူတာ Returns
İZBAN Inc က စက်လုပ်သမားအလုပ်အကိုင်များလုပ်ကိုင်ဖို့ပြန်လာဖယ်ရှား 13
ပြန်ဒဏ္ဍာရီ Orient Express ကိုမှ Going
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: မေလ 16 1991 တူရကီ TCDD ပွင့်လင်း Air ကိုရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းပြတိုက်ဖွင့်လှစ်။
ယနေ့တွင်သမိုင်းအတွက်: သြဂုတ်လ21991 Çamlıkရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းပြတိုက်ဖွင့်လှစ်
Summerhouse ရေနွေးငွေ့စက်ခေါင်းပြတိုက် (ဗွီဒီယိုနှင့်ဓါတ်ပုံများ)